IS CASILAAD GUUR!! – CABDILLAAHI RAAGE ~SAYYIDKA~
IS CASILAAD GUUR!!
SAYYIDKA October 9, 2016 October 9, 2016 CURIS
“Xaasku ma halkanuu daganyahay?” saxiib aan haduun isbaranay ayaa I waydiiyay, mareeyaha hay’adayada, dhalinta kaftan wadaagta aan nahay, ilaa mudalabka cunada iisoo dhiga iyo qaar kale oo badana midba si ayuu ii waydiiyaa, hablahana indhahooga ayaan ka milicsadaa rumaysi la’aanta, markaan ugu jawaabo “Maya! Wali walaal ma aanan guursan”. Intaas waxa ii dheer ehel iyo qarabo, midka ay dani isku kaayo keento iyo ka kadisku na kulmiyaba si googto ah ayuu ii yidhaa “Cabdulaahi waa Goorma?!”, hadaanay I odhanba “ma gabadhbaan kuu doonaa?”. Warkaasi waxa uu cirka isku sii shareeraa ayaanta rafiiqyaday mid liiska guurdoonka ka baxo, ka qalinjabiyo akadmiyada haasaawaha oo qalinka ku duugo aadame ay isdoorteen.
-Adaa hadhay Cabdillaahi?!
-Miyanad ku xigin?!
Iyo waydiimo la mid ah ayaa iyagna igu suga meherada, aroosyada -aanan kuba badnayn- iyo reeraha yagleelkoodu cusubyahay. Xataa tagsiile maalin dhawayd aan baabuurka ka kiraystay “Iska guurso” ayuu igula taliyay!!!
Qiyaastii anuunbaa hadhay, waxa dhiman uun in aan iswaydiiyo Maxaa aan u guursan la’ahay?!
“Mar qudha ayuunbaan hinaasaa” ayaan galab gaabanoo aan wada joognayku idhi ayaan-badantii aan waagaa is calamanayn, “Marka aan arko rafiiq hore, oo ilmihii curdeed gacanta haysta” in aan hinaaso ayaan u sheegay alla barakeedaas, oo iyada lafteedu hada dhawr daadihisa.
Haasaawaha ma kala caaganin oo simikaadhyadii sharkidaha kharaskhka yar ay bixin jireen ayaan marag u haystaa, hadalkana waaba xirfadayda, “inanka makarafoonka” naasaysihii isoo maray ayay ka mid ahayd oo hadalka ma kala gabano, hadaba maxaan safka uga baxay, oo aan xilkii guurdoon-ka iskaga casilay?!
Habeenka cawayska iyo cayaarka, marka damaashaadka lagu kala dareero ka dib, reerkaagu siduu u ekaan? Muxuu noqon maalinlaha joogtada ah ee aad ku noolaandoonto? Ayaa marwalba iswaydiiyaa.
Madax-banaanida ayaan qadisaa, ma lihi jadwal, hadaan yeeshana ma fulin aqaan, waxaan ku talamaa halka ay ku danbayn doonto madaxbanaanidaasi, aadbaanan uga walwalaa masiirkeeda, ugama baqo lamaanahaygu in ay ku xadgudubto ee waxaan kuga baqaa in aan anigu iyada darteed ugu xadgudubo, ileen nin lamaane lihi jar uu jecelyahay kama boodi karee.!!
Madaxbanaanida uun maaha waxa aan wadnaha farta ugu hayaa, waxa kale oo aan u baqaa guurka laftiisa, waxaan ku talamaa sidee loo gacan qabtaa guur dhulgariir ku dhacay? Waxa an iswaydiiyaa in aan karti u leehay kabida qarqaraxyada ka dilaaca dhulka jacaylka iyo deegaanka wadanoolaansha, wayna I walwal galisaa kartida lamaantaydu u yeelan karto arinkaas.
Hadiiba aan isku qalbi qaboojiyo guur kastaba waa la kulmaa qarxyo baabuur ismiidaamiyayaal hadal macaan wadaan fuliyaan, oo kusii niyad dajisto wadanka intaa baaxad le’eg aqal kasta, habeen kasta ugu yaraan qol qudha ayay laba qof go’ kaliya wada hoos galaan, waxa igu soo booda “diyaar ma u tahay in guurkaagu la mid noqdo kuwaas qaar abdan aan la kala saarin xariiqinta u dhaxaysa wada jooga iyo kala tagida?!” anoon wali taasba ka warcelin ayaay iskay horkeentaa “Hadiiba aad ku raaxaysan waydo guurkaas, ood lamaantaada isku faraxsanaan waydaan ka warami?!”
Dhamayso habeenka koobaad iyo cabsidiisa, ku soo celcesho qosolkii koobaad iwm.. todoba bax markaagii koowaad, bisha malabkaana soo afmeer, iska laab xaashidaas, sareeye ayaa jira’ oo faxan, ayaan ku guuxaa. Waxbase kama dheefsado oo waxa isoo ag kambadhuudhsata waydiin kale oo hawaawiga igaga kicisa “kuwa aad dhashana?!”… “Yaaa. Maxay qabaan kuwaan dhalaa?!” hadaan ku aamusii is idhaahdana, waxa ay igu daldashaa dabxidh waydiimo ah, oo dhan looga gabadaa jirin, waxa ay iiga bilowdaa “Sidee ayaad u korin?, Maxaad bari ama wax ubari?, dhaqankeed ku barbaarin?”. La yaab badanaa nolosheenu, waxa aad moodaaba in aan sidii Aadam iyo Xaawa hada cariga soo dagnay, wax qeexan oo meel loogu hagaago lihi maba jiro bulshdeena.
“Waxabarshadooda maxaad u qorshaysay?” ayay igaga soo qabataa safarkaa tallan ee ila dheeraaday. Waxay ii raacisaa “Ma malcaamad ayad gayn?” … “Dabcan maya, waa ciqaab iyo wakhti lumis, ii sheeg ilmo ku aflaxay wax uu ka soo bartay macalinkii usha dheraa ee la isku khuukhin jiray?!” ayaan afka ku qabtaa, markaasaan idhaa dugsina ma jiro oo kuwa xukuumadana waa warshada shaxaad qaatayaasha, kuwa gaarka ahina waa tukaamo aan shaqaysan garanayn kuwaa horenawaxba kuma dhaamaan aan ahaynqiimaha fiida ee car igoo’da ah iyo baabuurta magacda laga buuxshay mooyaane!!!.
Tola’ay, sidee samanka wax loo dhalaa. Maya, sideebaa loo guursan karaa, iga walee kii u badheedhaa iga indho adag, oo iga qalbi adag!!! Waaba cidii safka kusii jirta, anu waan iscasilaye’ yaa I raacaaya?!
*C.LAHI RAAGE “SAYYIDKA”
Caqabadaha Guurka, Doobnimo, Guur, Guurdoon, Guurka Iyo Dhaliyarada, Guurla'aan, Iscasilad, Ma Guursatay, Soomaali iyo Guur
Previous TALLAN #4 | MAGUURSATAY?!
Next WADANI IYO WAYDIINTA ISBADALKA?